Dia Maharitra Alimony ny Zavatra momba ny Lasa - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Dia Maharitra Alimony ny Zavatra momba ny Lasa
Ny hany olana, izy sy ny vadiny dia samy tsy an'asa
Naharay mailaka vao haingana avy amin'ny mpamaky izay te-hiala amin ny"fanevatevana ny fanambadiana"Izy dia sahiran-tsaina izy satria tsy nanam-bola ny antontan-taratasy ho fisaraham-panambadiana na ny fanohanana ny tenany aorian'ny fisaraham-panambadiana. Toy izany ny vehivavy maro, izy dia ambany ny fahatsapana fa raha izy nisara-panambadiana izy, dia handray alimony, FA izy no eo ny tena satria ny vadiko dia tsy nanana fidiram-bola mba handoavana izany nihevitra alimony. Nanontany ahy izy hoe,"Dia ny mpitsara hanao azy ny asa ary handoa ahy."Dia namaly tamin'ny alalan'ny nilaza izy fa ny mpitsara afaka order azy mba hahazo asa fa, izany dia ny vadiny na tsia ny asa no nahazo. Izaho koa dia nilaza izy fa ny mpitsara afaka milaza fa izy koa dia hahazo asa sy hanohana ny tenany. Misy hevi-diso fa ny vehivavy dia manana ny momba alimony sy maharitra ny fanambadiana. Izy io dia nino fa raha ny fisaraham-panambadiana rehefa maharitra ny fanambadiana fa ny vadiny taloha dia ho tompon'andraikitra ara-bola ianao amin'ny baiko nomen'ny fitsarana maharitra alimony.
Alimony ny lalàna-panjakana manokana ny tsirairay-panjakana misahana ny fitantanana ny raharaha amin'ny hafa fomba.
Am-polo taona vitsivitsy lasa izay dia mahazatra ny vehivavy homena maharitra alimony rehefa maharitra ny fanambadiana. Ny fitsipika ao amin'ny ankamaroan'ny firenena amin'izao fotoana izao dia rehabilitative alimony izay dia karama ho an'ny sasany, ny faharetany, ary manome ny vehivavy fotoana"hanatsarana"ny tenany ara-bola aorian'ny fisaraham-panambadiana.
Joan no ara-pahasalamana, manan-tsaina taona vehivavy
Texas sy Mississippi loka alimony ihany ny fanambadiana ny folo taona na mihoatra, ary afa-tsy ho fohy ny fotoana. Ny farany-panjakana ao amin'ny firenena mba hanohy ny loka maharitra na maharitra alimony, Massachusetts, dia izao fanavaozana ny alimony ny lalàna mba hahatratra ny sisa amin'ny firenena. Raha ny fanavaozana mandalo, alimony fandoavam-bola amin'ny fandaharam-potoanan'ny dia mifototra eo ny isan'ny taona roa no nivady. Ohatra, raha toa ka ny roa efa manambady latsaky ny dimy taona, ny faharetan'ny alimony mety afa-tsy ho antsasany ny isan'ny volana ao amin'ny fanambadiana. Raha toa ny mpivady dia nivady nandritra ny folo ny dimy ambin'ny folo taona, ny ambony indrindra term alimony mety ho nahazo ny loka ho an'ny ho fitopolo isan-jato ny fotoana izy ireo manambady. Ny mpitsara ihany no mety tsy ho afaka ny fisainana mazava, mba loka alimony mandrakizay ao amin'ny fanambadiana ny roa-polo taona. Mino aho fa afaka milaza fa alimony ny fanavaozana dia namely ny firenena sy, na tianao izany na tsia ny vehivavy izay efa avy naneho ny olona izay mihazakazaka panjakana solombavambahoaka manana ny mitaiza kely izany ka foana ny fanantenanao ambany rehefa inona na raha toa izy ireo dia mandray alimony aorian'ny fisaraham-panambadiana. Araka Beverly Willett, Filoha lefitr'ilay vondrona ho an'ny Fanavaozana ny fisaraham-Panambadiana,"Ny ara-bola mety mijanona-any an-trano ny ray aman-dreny miatrika rehefa tonga alimony dia bebe kokoa aza manahiran-tsaina. Ary ao no misy ny hevi-diso, raha toa ianao ka mijanona-any an-trano ny ray aman-dreny izay nahafoy ny asa mba hitaiza ny ankizy manana zo maharitra alimony. Araka ny filazan'ny Ramatoa Willett raha roa ny ray aman-dreny manaiky ny ray aman-dreny iray mitoetra an-trano dia izay fifanarahana dia tokony ho ara-dalàna manan-kery aorian'ny fisaraham-panambadiana. Ary noho izany finoana izany, dia ny vehivavy manerana ny firenena dia tezitra izy ireo satria tsy maintsy ho tompon'andraikitra ara-bola ny tenany indray mandeha ny fisaraham-panambadiana dia farany na ny fohy ezaka alimony mitantana avy. Raiso Joan ohatra Ny vadiny dia nanome baiko handoa alimony nandritra ny fito taona, satria Joan efa stay-at-trano ny reniko, efa nahafoy ny asa ary rehefa naniry izy ny fisaraham-panambadiana nihevitra ny vadiny taloha ny toerana manohana azy, satria efa tonga amin'ny fifanarahana izay dia manome ny fahafahana ara-bola mijanona tompon'andraikitra amin'ny tenany. Joan no alimony teny momba ny ho tonga ny farany, ary izy dia ao amin'ny fisavoritahana, satria tsy niverina ny asa-kery na handeha hiverina any amin'ny oniversite sy ny fanorenana ny asa dia efa skating ary tafavoaka velona amin'ny alimony. Joan mino ny lalàna dia tokony ho niova toy izany koa ny vehivavy toa azy dia afaka mahazo maharitra alimony, ary tsy maintsy hiatrika ny zava-tsarotra ara-bola izy ankehitriny miatrika. Ny zanany lahy dia izao tany amin'ny oniversite, ny zaza mitaiza ny andro no ao ambadiky azy fa tsapany vadiny taloha tokony mbola hatao ny miandraikitra azy, ny"fomba fiaina."Izaho dia afaka hahatakatra ny olana iray dia face rehefa fanorenana ny asa rehefa avy nandany taona maro toy ny stay-at-tokantrano ny reny, izaho efa nisy toy izany ny toerana ny tenako. Tsy hahatakatra na izany aza ny eritreritra fa dingana mandeha ho mino fa olona hafa no tokony ho tompon'andraikitra ara-bola ianao, nandritra ny androm-piainany, satria fotsiny ianareo ka mijanona ao an-trano, ary nanangana ny ankizy. Ao amin'ny lahatsoratra iray ho an'ny namany sary, Jeff Landers milaza hoe,"Raha misy vehivavy efa ao anatin'ny fotoana maharitra ny fanambadiana, ary izy no na avy amin'ny mpiasa nandritra ny taona maro, na manana fidiram-bola fa dia betsaka latsaky ny vadiny, mino aho fa izy dia mila sy mendrika -alimony mba hihazonana ny post-fisaraham-panambadiana ny fomba fiainany izany, fara fahakeliny, somary mitovy ny fomba fiainany izy nahafinaritra nandritra ny fanambadiana."Manaiky aho amin'ny Mr. Landers ary raha nipetraka tany amin'ny tontolo tonga lafatra ny vadiny, ny ray no tsy azo avela, ny Fianakaviana Rafi-Pitsarana mba nampidirina am-ponja tsy handao ny fianakaviany izay ara-bola miankina aminy. tsy misy fiantraikany ihany Koa satria isika tsy hiaina ao amin'ny tontolo tonga lafatra sy ny fisaraham-panambadiana ny lalàna ankehitriny manova ny lalana araka alimony dia sahiran-tsaina aho ny mandrisika ny vehivavy rehetra mba hanao asa safidy izay tsy midika fa ny olona iray andro mifarana ny niharam-boina ny lehibe alimony hevi-diso.
Shina Ny Fitsarana Tampony: Izay Fitsarana Manana Fahefana Hitsara Ny Famolavolana Patent Fifandirana. Bridge IP Lalàna fanehoan-Kevitra
Neach-lagha na h-Obraichean ann an Sìona - Glassdoor